Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Dean Henderson Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-athikili yethu inikela ngemininingwane ephelele ngeDean Henderson Childhood Indaba, i-Biography, amaqiniso omndeni, abazali, impilo yakuqala, impilo yomuntu, intombazane, indlela yokuphila kanye neminye imicimbi ephambili kusukela ngesikhathi ayeseyingane ngaso lapho ethandwa.
UDean Henderson Ukuphila Kwasekuqaleni kanye ne-Great Rise. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokukhula kwakhe okusheshayo kusuka ngesizini ka-2019/2020, okuye kwaba ngumqhudelwano omuhle kakhulu kuye UJordani Pickford Iqembu lesizwe lase-England. Kakhulu, imbangi enkulu yokuthi UDavid de Gea's Indawo yokushaya amagoli eManchester United.
Kodwa-ke, bambalwa kakhulu abathandi bebhola abake bafunda ukufunda iDiography kaDean Henderson esikulungiselele futhi kuyajabulisa impela. Manje ngaphandle kokunye, ake sikunikeze kuqala UDean Henderson's Wiki, ngaphambi kwe INDABA EFANELE.
UDean Henderson Biography (Imibuzo yeWiki)
Igama eligcwele: UDean Bradley Henderson.
Usuku lokuzalwa: Ngo-12 Mashi 1997 (uneminyaka engama-23 njengo-Ephreli 2020).
Bazali: UMnu noNkk Henderson.
Ikhaya Lomndeni: I-Whitehaven, eNgilandi.
Izakwethu: UCalum Henderson (umfowethu omdala) noKyle Henderson (umfowethu omncane).
Ukuphakama: I-6 ft 2 ku (1.88 m).
Imfundo yebhola: ICarlisle United (2005-2011) neManchester United (2011-2015).
Imali engenayo: £ 520,000 kuya ku- £ 1 million.
Umholo: Ama- £ 25,000 ngesonto (njengoba kwenzeka ngoMashi 2020).
Indaba Yobuntwana KaDean Henderson:
Kuqala, amagama akhe aphelele athi “UDean Bradley Henderson“. UDean Henderson wazalwa ngomhlaka 12 Mashi (March) 1997 eWhitehaven, e-United Kingdom. Igoli elikhulayo lase-England lazalwa njengendodana yesibili nengane kubazali bayo.
UDean Henderson wachitha iminyaka yakhe yobuntwana esemncane ekhula kanye nabafowabo; umdala ogama lakhe nguCalum futhi omncane owaziwa njengoKyle Henderson. Ngezansi isithombe esihle sabafowethu bakaDean Henderson ngezinsuku zabo zobuntwana.
Hlangana nabafowabo bakaDean Henderson- Callum Henderson (ongakwesokudla) noKyle Henderson (maphakathi) ngaleso sikhathi lapho babeyizingane. Isikweletu: I-Instagram
UDean Henderson'S Isizinda Somndeni Nemvelaphi:
Ngokungafani nabasubathi bebhola abakhona njengamanje nababekhona nabazali abacebile okungukuthi; UFrank Lampard, Gerard Pique, Mario Balotelli futhi Hugo Lloris, wethu uqobo uHenderson akakhuliswanga ekhaya elicebile kakhulu. Iqiniso liwukuthi, abazali bakaDean Henderson babenjengabantu abaningi edolobhaneni laseWhitehaven elalisebenza, baphila izimpilo ezijwayelekile futhi bengakaze balwa nezimali.
Umndeni kaDean Henderson uduma eWhitehaven. Leli yidolobha eliyitheku elisogwini olusentshonalanga neCumbria, eduze neLake District National Park eNyakatho Ntshonalanga eNgilandi. I-Whitehaven ichweba eliyinhloko, eliye lazitholela idumela elihle lokuhweba kwama-rum lase-UK.
Le yiWhitehaven- lapho umndeni kaDean Henderson uqhamuka khona. Isikweletu: Pinterest ne-Instagram
Ngabe ubuwazi?… UGeorge Washington (umongameli wokuqala wase-United States) izimpande zomndeni zixhunyaniswe neWhitehaven. Yebo! Idolobha ethekwini likhaya kukanina ozala uyise UMildred Gale (1671-1701) owayehlala lapho wangcwatshwa eSt Nicholas Church yedolobha.
UDean Henderson Ingane Yendaba Yobuntwana- Kwemfundo Nokwakha Amakhasimende:
Eseneminyaka engu-5 ubudala, uDean waqala imfundo yakhe yamabanga aphansi eWhitehaven. Njengomuntu wesikole, wayethandana nemidlalo ngqo ngekhilikithi kodwa HHAYI ibhola ekuqaleni. UDean Henderson ubedlala phambili ekhilikithi, okuwumbukiso owaba umpetha wezingane kanye nomgcini wama-wicket.
Ngesifiso esivuthayo sokwazi okuningi, uDean omncane waqala ukubamba iqhaza emidlalweni yebhola. Ekugcineni, uthando lwayo ngeBhola lwahlula iCricket. Abazali bakaDean Henderson, ababengabalandeli beManchester United basungule indodana yabo ekuxhaseni iklabhu. Emuva ngaleso sikhathi, ukuthanda i-United kwamenza wagqoka i-United kits usuku phakathi, usuku luphume. Njengoba kuphawulwe ngezansi, kit ifana neyagqokwa ngezinsuku Eric Cantona.
Siqala ngokunethulela omunye wabokuqala bezithombe zobuntwana zikaDean Henderson. Isikweletu: I-Instagram
UDean Henderson Ubuntwana Indaba- Ukuphila Kwasemsebenzini Kwasekuqaleni:
UDean omncane wayazi ukuthi unethalente futhi angenza okuthile ebholeni. Kusukela eneminyaka engu-3 lapho eqala ukusekela i-United, ugogo wase-England wakusasa waqala esebenza impilo yakhe yonke, ephupha ngokudlala kuPremier League. Kuqala, wasebenzisa iphupho lakhe.
Eminyakeni engu-8 ngonyaka ka-2005, uDean omncane wamenywa uCarlisle United ngezivivinyo ze-academy aziphasa ngemibala endizayo. Abazali bakaDean Henderson bakhetha iklabhu ngoba kwakuyiyona kilabhu esiseduzane kunazo zonke (cishe imizuzu engama-55) ekhaya labo lomndeni.
Uthi bewazi?… U-Little Henderson (osesithombeni ngezansi) ekuqaleni waqala ukudlala ibhola njengomdlali ongaphandle, kodwa kamuva washintshela egoli ngaphambi kweminyaka yakhe yobusha.
UDean Henderson- Iminyaka yokuqala neCarlisle United. Isikweletu: NewsandStar
Isidingo sokuba nezilingo ezikhungweni zemfundo ephakeme safika lapho esondela eminyakeni yobusha bakhe. Injabulo yabazali bakaDean Henderson namalungu omndeni abengazi mingcele ngaleso sikhathi (eneminyaka eyi-14) enza izivivinyo zeManchester United zezemfundo.
UDean Henderson Biography- Umgwaqo Oya Udumo:
Ngemuva kokuhlala iminyaka eyisithupha eCarlisle United, uHenderson wanquma ukuqhubekela phambili namanye amakhilomitha angama-135 eManchester lapho aqala khona impilo entsha esikhungweni semfundo ephakeme e-United.
E-United, idrayivu nokuzimisela kukaDean Henderson kuyizimpahla zakhe ezibaluleke kakhulu. Njengoba yena Waqhubeka nokuvuthwa, wazibona esezinza kahle impilo ne-Academy futhi ethuthuka ngokuqina ngeminyaka yobudala be-United.
Uthi bewazi?… UDean Henderson wayephakathi kwabaphakanyiselwe i-Jimmy Murphy 2014–15 Umdlali osemncane weNyaka Womklomelo kodwa wehluleka Axel Tuanzebe- umvikeli oqinile. Ngo-Agasti 2015, uHenderson wasayina inkontileka yakhe yokuqala nezobuchwepheshe neqembu.
Njengomgadli wegoli eliphezulu, wahlangana nomncintiswano onzima. Ngaleso sikhathi, i-United yayinabagadli abaphezulu abahlanu; UDavid De Gea, UJoel Pereira, uSam Johnstone, uSergio Romero kanye noVictor Valdes odumile. Kwakunzima kuDean ukubadlula kalula. Ukuze athuthuke, wanquma ukuthola amadlelo amasha ngemalimboleko.
UDean Henderson I-Biography- Rise to Fame Story:
Kepha esikhundleni sokukhubeka lapho ebolekisiwe, unozinti osemncane ongumNgisi wahamba emandleni njengoba ekhokha izindleko zakhe ngokudlula IStockport County, Grimsby neShrewsbury Town. Ngesikhathi eseShrewsbury Town, uDean waba yintandokazi yabathandi bomuntu njengoba ebasiza ukuba baphumelele imidlalo eminingi.
Ngisafuna ithuba ne-United, uDean Henderson waphawula UDavid De Gea ukuze ube sezingeni eliphezulu lamandla akhe. Unqume ukuqhubeka nompela wakhe wemalimboleko ngenkathi engayeki kwi-United. Ngisho ngenkathi isayina isivumelwano seminyaka emibili yokwandiswa ne-United, inceku ethembekile ye-United yanquma ukuthatha nayo indlela yokubolekwa ISheffield United.
Ngenkathi Sheffield United ngaphansi UChris Wilder, UDean Henderson wezwa ikusasa lakhe lePremier League limbiza. Iqiniso liwukuthi, akazange asize nje Ukunyuselwa okuphephile kwe-Sheffield kuPremier League okokuqala kusukela ngo-2007. UDean uqhubeke nokuwina isicoco seqembu leYoung Player of the Year Award, kanye ne-Championship Golden Glove.
Unozinti we-English okhula ngokushesha unqobe i-Championship Golden Glove. Isikweletu: Skysports
Njengesikhathi sokubhidliza umlando kaDean Henderson, lo mgadli osemncane manje usengumgadli omkhulu wamagoli wePremier League ngokubonga imidlalo eminingi eqokiwe. Ubizwa ngokuthi ungumlandeli we David de Gea ngubani United ocabanga ukumthengisa ukuze amfake njengokhetho lokuqala. Okuningi, esikhundleni se Jordan Pickford njenge-England No 1 kepha ifomu likaHenderson alinakubonwa njengoba kungenzeka ukuthi athathe isikhundla sikaPickford njengenombolo elandelayo yase-England.
Isizini ka-2019 kuya ku-2020 yambona ukuthi ubhalwe njengomunye wabashaye amagoli amahle kakhulu e-England nasemhlabeni jikelele. Isikweletu: I-Instagram
Ngaphandle kokungabaza, kukhona wonke amathuba uHenderson ozovela njengomshayimagoli ongcono kunalokho De Gea futhi UPickford akukho sikhathi. Abanye, njengoba besho, umlando.
Ubani uDean Henderson Ntombi ?:
Ngokukhuphuka kwakhe udumo nokuzakhela igama kuPremier League, kuqinisekile ukuthi abanye abalandeli abadingayo bangafuna ukwazi ukuthi ngubani intombi kaDean Henderson. Okuningi ukuthi ngabe umgadli omuhle oshadile kusho ukuthi ukuba ngumfazi.
Iqiniso liwukuthi, ngemuva kwegoli eliye laphumelela futhi lihle, kunentombazane ebukhazikhazi obumazisiwe isithombe sayo ngezansi.
Hlangana nentombi kaDean Henderson. Isikweletu: I-Instagram
UDean Henderson nentombi yakhe baqala ubudlelwane obusondelene ezinyaweni eziqinile, ezibalekela ukucwaswa kwamehlo omphakathi. Izintombi zothando - ezingenazindodana noma amadodakazi noma angaphandle komshado - zenza ubudlelwane bazo obala emphakathini ngoNovemba 2019.
Njengoba kuphawulwe ngezansi, enye yezindlela zombhangqwana ezithandekayo ehlobo iyisiqhingi saseSpain namanzi e-Ibiza phakathi kwezinye izindawo ezinhle zasolwandle zaseYurophu. Ngezansi kuneDeanlessless eceleni kwentombi yakhe enhle noma i-WAG.
UDean Henderson noGirlfriend bathatha uhambo lokuhamba ngesikebhe. isikweletu: i-Instagram
Uthandwe uDean Henderson njengoba athumela lesi sithombe sakhe nentombi yakhe washo esidlangalaleni ngamazwi akhe;
"Siphila impilo yethu enhle"
Uma sibheka indlela bobabili abathanda izithandani ababuthatha ngayo ubudlelwano babo, kuyacaca ukuthi isicelo somshado kanye nomshado kungenzeka kube yisinyathelo esilandelayo.
UDean Henderson's Impilo Yakho:
Ukwazi ubuntu begoli lamaNgisi bekungakusiza ukuba uthole isithombe esingcono sobuntu bakhe ekushayweni kwegama.
Ngubani uDean Henderson?… Ukuqala, ungumuntu onengqondo futhi uvame ukuphupha ngezifiso zakhe. UDean uphefumulelwe yisidingo sokungalokothi alahle amaphupho akhe. Uzimisele ukwenza okungaphezu kwemingcele ukuze abonwe njengobalaseleyo kunalokho abe yikho.
UDean Henderson's Indlela yokuphila:
UDean Henderson uphila impilo ehlelekile yedolobha laseSheffield, impilo engenamali yokusebenzisa imali ngokungakhathali yize iholo lakhe lingu- £ 25k, ngaphezulu kwe- net 500,000 net net yemakethe.
Iqiniso liwukuthi, uDean Henderson uluhlobo lwebhola lezinyawo elibambelela kuzidingo ezisebenzayo ezingabizi kakhulu. Ngesikhathi sokubhala, ayikho into efana nokukhombisa izimoto zakwamanye amazwe, izindlu ezinkulu nezinye izinto ezibonakalayo kalula ngabathandi bezinyawo abaphila ngendlela ebambekayo. Kude kude nomphumela, uDean Henderson angathanda ukuchitha imali yakhe entombini yakhe.
Igoli elikhula ngokushesha aliphili impilo ethandekayo ngesikhathi sokubhala. Isikweletu: Gym4u
UDean Henderson's Impilo Yomndeni:
Into ebaluleke kunazo zonke empilweni "Family"Futhi"Love“. Amalungu omndeni kaDean Henderson anomuzwa wokuthi anakho konke lapho esenabo ohlangothini. Lapha, bafanekiselwa nokuba nomzuzu omkhulu womndeni phakathi I-Zest Harboride, indawo edumile yesimanje yaseBrithani eseWhitehaven, e-United Kingdom.
UDean Henderson Ukuphila Komndeni. Lapha, uboniswa eceleni komama wakhe, ubaba nabafowabo. Isikweletu: I-Instagram
Kulesi sigaba esithandekayo, sizokwethula amanye amaqiniso mayelana nabazali bakaDean Henderson namanye amalungu omndeni wakhe.
Mayelana nobaba kaDean Henderson:
Umgwaqo oya stardom wawungeke ube muhle njengoba unjalo ngaphandle kosizo lukababa wakhe omkhulu. Igoli lase-England aliyeki ukusebenzisa i Umkhosi woSuku lukababa wokukhumbula ubaba wakhe athi ungumlandeli wakhe wokuqala. Okufanekiselwe ngezansi ngubaba kaDean Henderson eceleni komfowabo omkhulu (uCalum).
Hlangana nobaba kaDean Henderson ofakwe eceleni kwakhe kanye nomfowabo omdala (uCalum). Isikweletu: I-Instagram
Mayelana UDean Henderson'mama:
Ukuqala, uneminyaka engama-52 ubudala ngesikhathi sokubhala (Ephreli 1, 2020). Unina kaDean Henderson unesibopho sokuziphatha kahle kwendodana yakhe kubuye futhi kushiye umgodi, okuyinto eye yathinta umbono wakhe empilweni. Okufanekiselwe ngezansi ngumama kaDean obukeka emncane kuneminyaka yakhe.
Hlangana noMama kaDean Henderson- Ngabe ubukeka emncane kuneminyaka yakhe? Isikweletu: I-Instagram
Amagama wabazali bakaDean Henderson awaziwa ngesikhathi sokubhala.
Okuningi mayelana UDean Henderson'Bazalwane:
Igoli lesiNgisi elikhuphukayo alinabo odade kodwa izelamani ezimbili; umdala ogama linguCalum futhi omncane, uKyle. Ngokungafani neCalum, uKyle Henderson uphila impilo eyimfihlo ngokweqile.
Kakhulu-ke iCalum yinde kakhulu kunoDean obukhulu obungamamitha ayi-6 ″ (inches). Ukungena ku-akhawunti yakhe ka-Calum Henderson ku-Instagram kuveza iqiniso lokuthi ushadile nokuthi izinto zakhe zokuzilibazisa kungenzeka zibe igalofu nokuntweza.
Okuningi mayelana UDean Hendersonizihlobo:
Ngaphandle kokungabaza, obabekazi bakhe, omalume bakhe (omalume) kanye nogogo nomkhulu (uma esaphila) ngokuqinisekile bazothola izinzuzo zokuba nezabo ngokwenhlangano yezindaba zebhola lesiNgisi. Njengasikhathi sokubhala, ayikho imibhalo ekhona kuwebhu mayelana nabo. Impela, sizokuvuselela uma sibona okuthile.
UDean Henderson's Amaqiniso angenakubalwa:
Kulesi sigaba sokugcina sika-Dean Henderson's biography, sizokwethula kuwe amanye amaqiniso angenakuphikwa.
Iqiniso # 1: Ungumnikazi Wamarekhodi Emhlaba:
UDean Henderson uyiGuinness World Record Holder. Uthi bewazi?… Uphethe irekhodi lomhlaba iGuinness World 'Isikhathi esisheshayo sokugqoka njengomgcini wegoli ' lokho akwenzele 49.51 imizuzwana. Akugcini lapho. UDean uphethe irekhodi lomhlaba iGuinness World for the 'Iningi likanobhutshuzwayo (ibhola lezinyawo) elihamba ngamakhanda ' akwenza ngomzuzu owodwa. Lawa marekhodi akha ingxenye enkulu ye-Dean Henderson's biography.
Iqiniso # 2: Ukwephulwa Komholo Kwasekuqaleni:
Selokhu athela othulini, abanye abalandeli abafuna ukwazi sebeqale ukuzindla ngamaqiniso kaDean Henderson, njengokuthi uthole malini lapho eqala umsebenzi wakhe noSheffield United.
Ngomhlaka 18 kuJuni 2018, uDean Henderson wasayina isivumelwano neSheffield United, nesambona efaka iholo lakhe £ 520,000 ngonyaka. Ukwephula iholo lakhe (izibalo ze-2018) ngamanani amancane, sinokulandelayo;
Ukuthola Kwakhe ePound Sterling (£)
Ukuthola Kwakhe e-USD ($)
Ukuthola Kwakhe e-Euro (€)
Lokho akuholayo Ngonyaka £ 520,000 $ 625,604 € 570,168
Lokho akuholayo Inyanga ngayinye £ 43,333 $ 52,133.68 € 47,513
Lokho akuholayo Isonto ngalinye £ 10,833 $ 13,033.4 € 11,878
Lokho akuholayo Ngosuku £ 1,547.6 $ 1,861.92 € 1,696.9
Lokho akuholayo Ngehora ngalinye £ 64.49 $ 77.58 € 70.7
Lokho akuholayo Ngomzuzu £ 1.08 $ 1.29 € 1.18
Lokho akuholayo Mzuzwana £ 0.02 $ 0.02 € 0.02
Ngokusekelwe kulezi zibalo ezingenhla zemiholo, yilokhu uDean Henderson akutholile selokhu waqala ukubuka leli khasi.
Uma okubonayo ngenhla kufundeka (0), kusho ukuthi ubheka ikhasi le-AMP. Manje clickLAPHA ukubona ukunyuswa komholo wakhe ngemizuzwana.
Uthi bewazi?… Indoda ejwayelekile eNgilandi ethola ingqikithi £ 2,340 inyanga izodinga ukusebenzela okungenani iminyaka 1.5 ukuze uzuze £ 43,333 okuyisamba iDean Henderson esithole ngaso ngenyanga eyi-1.
Iqiniso #3: UDean HendersonInkolo:
Igama elithi "Dean"Igama lomfana ongumKristu futhi igama lesiNgisi eliqhamuke nezincazelo eziningi. Kuze kube kuleli zinga, kulungile ukuqagela ukuthi uDean HendersonAbazali kungenzeka ukuthi bakhulise indodana yabo ngokuya ngezinkolelo zobuKristu. Yize ukuthwala kukaHenderson ezindabeni zokholo kuphansi noma ngabe ukungahambisani kwethu kumvumela ukuthi abe ngumKristu.
Iqiniso #4: Ubamba a United Qopha:
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-40 iManchester United ikwazi ukukhiqiza unozinti wayo osunguliwe ku-academy yabo. Uthi bewazi?… UDean Henderson manje uphethe irekhodi lokuba ngunozinti wokuqala futhi owathandwa kakhulu ekhaya elikhule ekhaya ngemuva kukaGarry Bailey ngo-1978.
Naye, iManchester United okokuqala ngqa eminyakeni engama-40 ayidingi ukungena emakethe yokudlulisa lapho ifuna abadlali abanohlonze njengoba bekwenzile phambilini.
Iqiniso #5: Inketho Ethandelwe Abathandi Bemidlalo yeFIFA:
Uma ungumthandi wemodi ye-FIFA Career mode, sicela wenze kahle ukuthenga uDean Henderson. Naye eceleni Gianluigi Donnarumma inamandla okuba ngomunye wababhali Abahamba phambili kwiFIFA.
Unozinti waseNgilandi uyindoda yesikhathi esizayo. Isikweletu: SoFIFA
Iqiniso # 6: Ingabe uDean Henderson noJordani Henderson Brothers:
Ngemuva kokukhuphuka kukaDean Henderson enkundleni yePremier League, abanye abalandeli baye ku-inthanethi ukubuza ukuthi ngabe uhlobene nokaputeni weLiverpool, uJordani Henderson. Iqiniso liwukuthi, uDean noJordani Henderson abahlobene nganoma iyiphi indlela ngisho nawe babelana ngesibongo esifanayo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Dean Henderson yethu Yobuntwana Indaba ye-Plus Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Sheffield United Soccer Diary
U-Bruno Fernandes Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
Daniel James Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
U-Ole Gunnar Solskjear Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
U-Victor Lindelof Ingane Yomntwana Ongenayo Plus Untold Biography Facts
U-Eric Bailly Ingane Yendaba Nama-Untold Biography Facts
I-Radamel Falcao Ingane Yombhalo Plus Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Mashi 10, 2019